Nextcloud 17 ikozvino yavapo, ziva nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeNextcloud 17 yakatoburitswa, izvo Ndicho chikuva chakagadzirwa seforogo yeiyo wegaCloud chirongwa, yakagadzirwa nevatengi vakuru vegadziriro ino. Nextcloud uye neyakoCloud inokutendera kuti ushandise yakazara yekuchengetedza gore pane ako maseru masisitimu nerutsigiro rwekuchinjana dhata uye kuwiriranisa.
Nextcloud inopa maturusi ekugovana, kudzora shanduko, rutsigiro rwekutamba zvemultimedia zvemukati uye tarisa zvinyorwa zvakananga kubva pawebhu webhusaiti, kugona kuwiriranisa dhata pakati pemakina akasiyana, kugona kuona nekugadzirisa data kubva kune chero chishandiso chero kupi kunetiweki.
Kuwana dhata kunogona kurongeka uchishandisa webhu interface uye neWebDADA protocol uye yayo CardDAV neCalDAV yekuwedzera.
Kusiyana neGoogle Drive, Dropbox, Yandex.Disk uye box.net masevhisi, iwo egaCloud uye Nextcloud mapurojekiti anopa mushandisi kutonga kwakazara pamusoro pe data ravo: ruzivo haruna kusungirirwa kune ekunze akavharwa makore ekuchengetedza masisitimu, asi ayo anoiswa mushandisi-anodzorwa midziyo.
1 Nhau huru dze Nextcloud 17
2 Dhawunirodha Nextcloud 17
Nhau huru dze Nextcloud 17
Pakati pezvinyorwa zvitsva zveiyi nyowani vhezheni yeNextcloud kuwedzerwa kweiyo «Remote pukuta» basa rinobuda pachena , que inobvumira vashandisi kudzima mafaera pane nhare mbozha nevatungamiriri vanodzima dhata kubva kumidziyo yese yemushandisi wakapihwa.
Chinhu icho chinogona kubatsira kana iwe uchifanira kubvumidza wechitatu kuburitsa mamwe mafaera mukuita chirongwa, uye mushure mekupedza kubatana kuti ubvise iwo.
Chimwe chinhu chitsva chinomira chiri «Nextcloud Chinyorwa» inova yakamira yega bvunzo mupepeti nerutsigiro rweMarkdown markup uye shanduko yeshanduro, ichikubvumidza iwe kugadzirisa iwo mavara pamwe chete pasina kuisa vepamberi edhita seCollabora Online uye ONLYOFFICE.
Mupepeti anosanganisa mushe nevhidhiyo yekufona uye yekutaurirana system kuronga kubatana kweboka revanhu mugwaro.
Uye zvakare, zvinojekeswa izvo akawedzera yakachengeteka yekutarisa nzira yezvakavanzika zvinyorwa zvinyorwa, mafaera ePDF nemifananidzo, mune makopi eruzhinji emafaira akachengetedzwa inogona kuve watermarked uye yakavanzwa kubva kuruzhinji nzvimbo dzinoburitswa zvichibva pamatagi akasungirirwa.
Iyo watermark inosanganisira iyo chaiyo nguva uye mushandisi akaisa gwaro. Iri basa rinogona kushandiswa pazvinodikanwa kudzivirira kuburitswa kweruzivo (kutsvaga kunobva iko kuburitsa), asi panguva imwechete inoita kuti gwaro riwanikwe kuti riongororwe nemamwe mapoka;
Iko kugona kwekugadzirisa maviri-chinhu chechokwadi chakaitwa mushure mekutanga kupinda.
Mutungamiri ane mukana wekugadzira akasarudzika matokeni ekupinza nechimbichimbi kana zvisingaite kuisa chinhu chechipiri. Sechinhu chechipiri, TOTP (semuenzaniso Google Authenticator), Yubikeys kana maNitrokeys ma tokeni, SMS, Teregiramu, Zviratidzo uye makodhi ekuchengetedza anotsigirwa.
Iyo Outlook yekuwedzera-in inopa rutsigiro rwemabhokisi etsamba akachengeteka. Kuchengetedza kubva mukubatika kwetsamba mavara, email ziviso yetsamba nyowani inotumirwa kune anogamuchira ine chinongedzo uye sarudzo dzekupinda, uye iwo mavara uye zvinongedzo zvinoratidzwa chete mushure mekupinda Nextcloud.
Wakawedzera kugona kushanda neLDAP mune rekodhi modhi, ichikubvumidza iwe kudzora vashandisi muLDAP kubva kuNextcloud.
Yakabatanidzwa neBMM Spectrum Scale uye Collabora Online Global Scale masevhisi, uye yekuwedzera vhezheni vhezheni yeS3.
Yakagadziriswa mashandiro uye kupindura kweiyo interface.
Huwandu hwezvikumbiro kubva kuseva panguva yeiyo peji rekutakura maitiro zvadzikiswa
Kugadziridza kweye mu-chitoro nyora mashandiro
Chiitiko chitsva chinotumira chinongedzo uye yekutanga mamiriro maneja
Dhawunirodha Nextcloud 17
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kurodha pasi iyi vhezheni yeNewcloud, vanogona kuenda kune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Nextcloud 17 ikozvino yave kuwanikwa, ziva kuti chii chitsva